Accountant | SPS Trading Co.,Ltd ﻿
11.7.2019, Full time , Export / Import / Trading
Company: SPS Trading Co.,Ltd
•	လုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်လို စိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	LCCI Level I,II,III,i-stock Software ကျွမ်းကျင်သူဦးစားပေးမည်။
•	Computer Microsoft Office Word,Excel ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၂ နှစ်အထက်ရှိရမည်။
Work location No.130,7th Floor,23 Street(UpperBlock),Latha Township,Yangon.
74 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	လုပျငနျးကိုစိတျပါဝငျစားပွီးတကျကွှစှာလုပျကိုငျနိုငျရမညျ။ •	သှကျလကျခကျြခြာ၍ဆကျဆံရေးအထူးကောငျးမှနျရမညျ။
110 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူ •	သွက်လက်ချက်ချာ၍ ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူ •	Team Work ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူ •	Sales (Phone)
•	လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူ •	သွက်လက်ချက်ချာ၍ ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်
•	လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူ •	Team Work ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်လို စိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	သွက်လက်ချက်ချာ ၍ ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	သွက်လက်ချက်ချာ ၍ ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	Team Work ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်.
•	လုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်လို စိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	Team Work ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်.
•	သွက်လက်ချက်ချာ၍ ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	Team Work ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	Team Work ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	သွက်လက်ထက်မြတ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	သွက်လက်ထက်မြတ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၂ နှစ်ရှိရမည်။ •	ကားမောင်းကျွမ်းကျင်ပြီး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။
Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon SPS Trading Co.,Ltd Accountancy Jobs Accountancy Jobs Accountant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon